Heegan oo dhib la’aan uga badisay Muqdisho United iyo Banaadir oo ka adkaatay Midnimo – Gool FM
Heegan oo dhib la’aan uga badisay Muqdisho United iyo Banaadir oo ka adkaatay Midnimo
jilacow October 24, 2016
(Muqdisho) 24 Okt 2016- Kooxda Heegan ayaa guul ka gaartay naadiga Muqdisho United, kullan xiiso badan oo galabta ka dhacay garoonka Koonis degmada C/Casiis ee gobolka Banaadir.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0, oo ay ku hoggaamineyso naadiga Heegan , waxaana u dhaliyay xiddiga khadka dhexe ee Nuur.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta, kooxda Heegan ayaa keensatay goolkii labaad, waxaana u dhaliyay kabtankeeda Jabriil Xasan Fariid isagoo ka dhigay 2-0.
Wiilasha uu hoggaamiyo Cabdi Bootaan ayaa soo qaaday weeraro is xiga iyagoo la yimid hal gool waxaana u ansixiyay xiddiga weerarka ee Shaaluu.
Daqiiqadii dheeriga ee lagu daray ciyaarta ayaa u suura gashay Heegan in ay la timaado goolkii saddexaad, waxaana u ansixiyay xiddiga Okoro Matias waxaana kullanka ugu dambeyn uu kusoo dhamaaday 3-1.
Dhanka kale kooxda Banaadir ayaa 5-0 uga badisay naadiga ka ciyaarta heerka labaad ee Midnimo waxaana goolasha u dhaliyay xiddigaha Maxwell, Daadir Aamiin iyo 3 gool uu ansixiyay xiddiga khadka dhexe ee Imam.
Sikastaba labadii kooxood ee galabta soo badiyay kuwaas oo kala ah Heegan iyo Banaadir ayaa isku beegmay wareega afar dhamaadka, iyagoo wada ciyaari doono maalinta Khamiista ah, sida ku xusan jadwalka kasoo baxay xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda Cagta.
Garsooraha dhex dhexaadin doono kulanka Man United iyo Man City ee abracada oo la shaaciyay
Booliiska oo gacanta ku soo dhigay taageerihii wax yeeleeyay Neymar